Kasị ụzọ iji tọghata AVI ka MP4 na lossless àgwà na Mac / Win (Windows 10 akwado)
Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 Na Zero Ogo Loss na Win / Mac (Yosemite gụnyere)
Ụfọdụ media ngwa na obere media ngwaọrụ adịghị akwado AVI na-achọ akakabarede, dị ka iPhone, iPod, iPad, HTC na na, mgbe MP4 bụ a video format ọtụtụ hụrụ na ọtụtụ obere media ngwaọrụ n'ihi na nke ya elu mkpakọ na elu àgwà mmepụta .
Ọ dịtụwo mgbe ị chọrọ a NCHEBE video Ntụgharị na-atọghata AVI ka MP4 ibelata ngwa ngwa, àgwà emebibeghị? Isiokwu a ga-ike ikwu na ị na oké video Ntụgharị maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere) ka mfe tọghata AVI ka MP4. Dị nnọọ nweta ya n'okpuru.
Part 1: Best AVI ka MP4 Video Ntụgharị maka Windows / Mac
Part 2: Free AVI ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online AVI ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 4: Họrọ AVI ka MP4 Video Ntụgharị na nke ahụ bụ Right maka Ị
Part 5: Extended Knowlege maka AVI na MP4
Part 1: Best AVI ka MP4 Video Ntụgharị maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
• Nkwado converting dị iche iche videos, dị ka AVI, MP4, MKV, MOV, wdg
• Personlize gị video na pụtara mmetụta.
• Otu-pịa ka ọkụ n'ụlọ video ka DVD na beatiful menu ndebiri.
• Tinye metadata ka fim, TV na-egosi na ebe obibi videos.
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X 10.6, 10.7 10.8, 10,9
Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 na Wondershare Video Ntụgharị
Na-esonụ bụ a Nduzi na Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 na Windows. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, dị nnọọ na-ndị nkuzi ebe a, Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 na Mac.
Nzọụkwụ 1 Import faịlụ (s) a software
Ẹkedori a video Ntụgharị. Pịa "Tinye Files" na mbubata videos ị chọrọ iji tọghata ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ & dobe ha n'ime usoro ihe omume. Ogbe akakabarede a na-akwado. Ị nwere ike tinye ihe faịlụ otu mgbe.
Nzọụkwụ 2 Set MP4 dị ka mmepụta format
Pịa Format na akara ngosi na n'akụkụ aka nri na họrọ MP4 dị ka mmepụta format si format ndọpụta ndepụta.
Cheta na: Nke a ngwa-akwado converting faịlụ ka iche iche ngwaọrụ, dị ka Apple, Samsung, HTC, Blackberry, wdg Dị nnọọ Pịa na Ngwaọrụ icon iji họrọ gị chọrọ ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3 Malite AVI ka MP4 akakabarede
Pịa "tọghata" mgbe niile na-setịpụrụ, na mgbe ahụ MP4 ka AVI Ntụgharị ga mezue conversions na-akpaghị aka maka anyị. Ị na-ekwe ka kwụsị ma ọ bụ kwụsịtụ akakabarede n'oge usoro. I nwekwara ike pịa na-ekiri ndị video nkuzi n'okpuru.
Video Tutorial: Olee otú Jiri Wondershare AVI ka MP4 Video Ntụgharị maka Windows
Nke a appliction nwere ike ka gị free tọghatara AVI ka MP4 mfe. Ị nwekwara ike iji ya dezie videos na ibudata video si video nkekọrịta saịtị.
1. The free version naanị akwado converting nkịtị videos.
2. Ị nwere ike ghara ịtọ gị mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ dị ka 3D, HD na ngwaọrụ.
3. Akakabarede ọsọ kwesịrị ka a mma.
4. Na-ere ọkụ DVD na-adịghị na-akwado, ma.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị wụnye ọ bụla addtional ngwa na kọmputa gị, ị nwere ike na-agbalị free online AVI ka MP4 Ntụgharị n'okpuru.
Online AVI ka MP4 Ntụgharị
Free AVI ka MP4 Ntụgharị
Best AVI ka MP4 Video Ntụgharị
Tọghata n'ụlọ DVD
Tọghata Video ka nkịtị formats
Naanị nkịtị formats Naanị nkịtị formats Fọrọ nke nta niile formats, n'elu 150 formats
Ogbe ntughari nke video faịlụ
Oke bulite file size 100 MB Unlimited Unlimited
Video Nchigharị ọsọ Ngwa ngwa Ezi Kasị Video Nchigharị na ụlọ ọrụ
Video akakabarede àgwà General Ezi Lossless àgwà
Tọghata ọ bụla 2D videos ka a 3D format na ultrafast gbapụrụ ọsọ
Tọghata HD Video gụnyere 4K H.265 / HEVC
Ọkụ video ma ọ bụ ọdịyo na DVD ihe onwe onye
Download YouTube Video na vidiyo si na ndị ọzọ video nkekọrịta saịtị
Edezi ọrụ: Clip, Split, akuku, jikota, Bugharia na Ọzọ
Special mmetụta maka video edezi
Tinye ma ọ bụ wepu Text / Image Watermark
Ikwunye-na Ndepụta Okwu
Nyefee videos gị Apple na Android ngwaọrụ site na Wi-Fi
Iyi gị mgbasa ozi faịlụ na a PC ka a smart TV
Zuru okè DLNA nkwado wuru na
Part 5: Extended Knowlege maka AVI na MP4 Format
AVI bụ a multimedia akpa na e dere ma ọdịyo na video data. Ọ na-ekwe synchronous audio-na-video playback. AVI faịlụ akwado multiple gụgharia ọdịyo na video MP4 bụ a akpa format iji ya iji chekwaa video, audio, na ndepụta okwu data.Since-echekwa dị ka iTunes-eji nke a akpa format, ọ na-eji na iPod na PlayStation (PSP). Ọ na-aghọ a na-ewu ewu usoro.
Microsoft Akpụ akpụ Foto dị ọkachamara Group
Ihe ọmụma zuru ezu na AVI faịlụ Ọkpụkpọ
Olee otú iji tọghata Video_TS ka AVI
Olee otú iji tọghata AVI faịlụ na Mavericks
Olee otú iji Tinye SRT Ndepụta Okwu faịlụ ka AVI
Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files
Olee otú iji tọghata MP4 ka iPad (iPad Air gụnyere)
Achọ ndị kasị mma AVI ka MP4 video Ntụgharị, na-agbalị nnọọ Video Converter Ultimate n'okpuru.
Chromecast App ndepụta: Stream Obodo Video ka TV maka Windows / PC / Android / iOS
Olee otú iji tọghata MP4 ka iPhone
Olee otú iji tọghata VOB ka MP4 na Mac / Win
Flash Player maka iPhone / iPad / iPod Touch
Sorenson piakota-adịghị arụ ọrụ? Gbalịa Ya Alternative ugbu a
Top 5 Free MP4 ka MP3 converters: 100% Free tọghata MP4 ka MP3
Olee otú iji tọghata MP4 ka M4V
Olee otú iji tọghata WMV ka SWF
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 Na Zero Ogo Loss na Win / Mac (Yosemite gụnyere)